Otu esi emepụta ndabere na gam akporo site na iji titanium ndabere | Gam akporosis
Ọzọ na ndị na-esonụ nkuzi akwado na a video, M ga-egosi gị n'ụzọ dị mfe, otu esi akwado nke ngwa niile anyị rụnyere na njedebe Android anyị tinyere data gị niile.
Maka nke a, anyị ga-achọ a free omume na anyị nwere ike ịchọta na play Storeakpọ Titanium ndabere.
Na mgbakwunye inwe ngwa ngwa, ọ bụrụ na anyị chọrọ, anyị nwekwara ike ịchọta ugwo ngwa con ọtụtụ nhọrọ, na ọmarịcha ọdịiche dị na usoro mweghachi ahụ na-akpaghị aka, nke ga-azọpụta anyị ịpị ngwa niile iji wụnye.
Ọ bụ ezie na ozi anyị ga-arụ ndabere, na mweghachi mweghachi nke ngwa niile yana data ha na ngwa n'efu anyị ga-ezuru.
Otu n'ime ihe ndị dị mkpa iji nwee ike iji ngwa a dị egwu ma dị mkpa bụ na anyị bụ mgbọrọgwụ ọrụ, nke ahụ bụ, anyị ga-enwe a gbanye mkpọrọgwụ Maka ngwa ahụ iji rụọ ọrụ nke ọma, ọ bụrụ na ọ bụghị, egbula ya dịka ngwa na nkuzi agaghị arụ ọrụ maka gị.
Ihe ị ga-ekwu bụ a oké mkpa ngwaM na-ekwu ya na-eche maka ndị ọrụ ahụ niile masịrị m, ha bụ ndị egwuregwu na-anwale roms ọhụrụ ya na Wipeo sitere na data na ngwa anyị niile.
A na ngwa anyị na-eme a mweghachi ịhapụ njedebe na ngwa anyị niile dịka anyị nwere ha tupu ikpuchi nke rom ọhụrụ.
Mgbe ndabere, anyị pụrụ ịhụ otú anyị kere a nchekwa ọhụrụ oku titanium ndabereNke a bụ folda nke nwere data nke nkwado ndabere anyị, yana nke na tupu ịhazi sdcard dị n'ime ma ọ bụ nke mpụga, ọ dabere na ikpe ahụ, anyị ga-echekwa ya na nPC anyị ka ọ bụrụ na usoro nhazi ma ọ bụ nhicha ahụ agwụla, detuo ya azụ ụzọ gị mbụ.
Ime ya ndabere ma weghachite nke ngwa tinyere data ha, ị ga - agbaso ntuziaka ndị akọwapụtara na vidiyo vidiyo.
Ozi ndị ọzọ - Etu esi emepụta ngwa ngwa maka Heimdall
Budata - Titanium ndabere n'efu, Titanium ndabere Key
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Nche » Otu esi emepụta ndabere site na iji Titanium Backup
Ejirila m ya, maka na SGS dị nwayọ nwayọ wee tinye ROM ọzọ ma weghachite mmemme ahụ anaghị eme nke ọma, ọ gaghị aka mma ịhapụ obere oge ma wughachi ihe niile?
Zaghachi ka koji kabuto
Ana m agbali ime nkwado ndabere mana enwetaghị folda ahụ na V nke bụ ihe kpatara ya
Nnyocha Nwụrụ Anwụ Nwụrụ Anwụ
Stereomood, egwu gị dị ka ọnọdụ uche